डब्ल्यूएचओले भन्यो : अर्को महामारी आउन सक्छ ! « Mechipost.com
डब्ल्यूएचओले भन्यो : अर्को महामारी आउन सक्छ !
प्रकाशित मिति: १८ पुष २०७७, शनिबार २०:०८
विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोना भाइरसभन्दा प्राणघातक भाइरस विश्वमा महामारीका रुपमा फैलनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
डब्ल्यूएचओका आपतकालिन कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर माइक रायनले कोभिड–१९ अहिलेभन्दा भयानक हुन आवश्यक नरहेको र अर्को प्राणघातक महामारी विश्वभर फैलनसक्ने बताए । मंगलबार रायनले कोभिड–१९ महामारीलाई खतराको घण्टी भनेका छन् । “यो महामारी अति नै गम्भीर छ । यसले विश्वका प्रत्येक कुनामा असर गरेको छ । यद्यपी, यो यसभन्दा ठूलो हुन आवश्यक छैन”, मिडिया ब्रिफिङमा उनले भने ।
कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म विश्वभर १७ लाख ९९ हजार ३ सय ३७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसको मृत्युदर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत रहेको आँकलन गरिएको छ, अर्थात् अहिलेसम्म संक्रमित २ सय जनामा एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
स्पेनिस फ्लु पछिल्लो सबैभन्दा घातक महामारी थियो । यसले १९१८ र १९१९ को अवधिमा ५ करोडको ज्यान लिएको थियो । युवाहरुमा मृत्युदर बढी थियो र मृत्यु हुनेमध्ये २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरुको संख्या बढी थियो । यसको मृत्युदर २ दशमलव ५५ प्रतिशत थियो । यस्तै महामारी आजको समयमा आएमा खाद्यान्न क्षेत्रका कामदारहरु डरले घरमै बस्ने र सम्भावित रुपमा खाद्यान्न आपूर्ति बन्द भएर मानव सभ्यता नै सटडाउन हुने भय छ ।
“कोरोना भाइरस खतराको घण्टी हो । विज्ञान, खाद्यान्न, प्रशिक्षक र शासन व्यवस्थामा कसरी राम्रो गर्ने, कसरी एकआपसमा राम्रो सञ्चार गर्ने भनेर हामी सिक्दैछौं । तर पृथ्वीको हालत नाजुक छ”, डाक्टर रायन भन्छन्, “हामी एक बढ्दो जटिल विश्वव्यापी समाजमा बाँचिरहेका छौं । यी खतराहरू जारी रहनेछ । हामीले यस महामारीबाट सिक्नुपर्ने पाठ भनेकै मिलेर काम गर्ने हो ।”
अमेरिका, बेलायतलगायत देशहरुमा खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भएपनि भाइरस हाम्रो जीवनको हिस्साका रुपमा रहिरहनसक्ने रायनले बताए । “सम्भावित परिदृश्यअनुसार अब यो भाइरस स्थानीयस्तरमा खतराका रुपमा रहिरहनेछ । तर खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भएको सन्दर्भमा यो न्युन खतराका रुपमा रहनेछ”, उनले भने, “खोपहरु कति राम्रोसँग लगाइन्छ र कति बृहत्तर रुपमा लगाइन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । यसैले, हामीलाई न्यूनीकरणको दिशातर्फ जाने अवसर दिनसक्छ । यद्यपी, खोपको प्रभावकारीता उच्च रहँदा पनि कोरोना उन्मूलन हुने ग्यारेन्टी छैन । यो निकै कठिन चुनौती हो त्यसैले, जोखिममा रहेका व्यक्तीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी खोप वितरणको डिजाइन गरिएको हो ।”
संक्रामक जोखिमहरूका लागि डब्ल्यूएचओको रणनीतिक र प्राविधिक सल्लाहकार समूहका अध्यक्ष प्रोफेसर डेभिड हेमानले पनि स्थानीय स्तरमा यो भाइरस रहिरहने बताएका थिए । “कोभिड–१९ स्थानीय स्तरमा रहनेजस्तो देखिन्छ । जसरी अन्य चारवटा कोरोना भाइरस छन् । र, मानव सेल्समा पुनउत्र्पादन भएर यो निरन्तर म्युटेट (परिवर्तन) भइरहनेछ” उनले भने “भाग्यवस, हामीसँग जीवन बचाउने उपकरणहरू छन् र यसलाई जनस्वास्थसँग संयोजन गरेर हामी कोरोनासँगै बाँच्नसक्छौं ।”
डल्युएचओकी प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर सौम्या स्वामिनाथनले भनिन्, “खोप लगाउनुको अर्थ सामाजिक दूरी र अन्य सार्वजनिक स्वास्थ सेवाको अन्त्य होइन । कुनै खोपले वास्तवमा मानिसलाई संक्रमणबाट जोगाउँछ र यसलाई अन्यमा फैलाउनबाट रोक्छ भन्नेबारे विश्वस्त हुने प्रमाण हामीसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, खोप लिएका मानिसहरुले पनि उस्तै सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।” गम्भीर लक्षणसहितको कठोर संक्रमण र मानिसलाई मृत्युबाट रोक्ने मनसायका साथ खोप विकास गरिएको उनले बताइन् ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अदानोम गेब्रियसअसले महामारीको भयावह अवस्था र यसमा भएको सुधार एकैपटक झल्किएको बताए । उनले महामारीको नयाँ स्वरुपले आगामी वर्षका लागि चुनौति थपेको बताए । “महामारीको यस समय निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको असाधारण सहकार्यले नयाँ धरातल कोरिएको छ । पछिल्ला साताहरुमा केही देशमा सुरक्षित र प्रभावकारी भ्याक्सिनको प्रयोग सुरु भएको छ, जो अद्भूत वैज्ञानिक उपलब्धि हो,’ उनले भने,‘यो निकै राम्रो छ । तर, जबसम्म खोपको आवश्यकता परेका सबैले नयाँ खोप पाउँदैनन् र सुरक्षित हुँदैनन्, त्यतिबेलासम्म डब्लयुएचओले आराम गर्नेछैन ।”
१. प्लेग अफ जस्टिनियन
२. ब्ल्याक डेथ
४. थर्ड प्लेग
५. स्पेनिस फ्लु